Ubeko lwePCB kunye neClone -Shenzhen PhiliFast Electron Limited
IClone Clone kunye nobeko
I-PHILIFAST ineqela lobuchwephesha lobuchwephesha be-PCB kunye neminyaka emininzi yamava asebenzayo. Ukubandakanyeka kwiinkalo ezahlukeneyo ze-elektroniki.
I-PCB clone kukusebenzisa uphando olwenziweyo kunye nophuhliso lwetekhnoloji ukuphinda uhlalutye ibhodi yesekethe, kwaye ubuyisele iifayile zemveliso ye-PCB yoqobo, iibhili zezinto (i-BOM) zeefayile, iifayile zesikimu kunye nezinye iifayile zobugcisa, kunye neefayile zemveliso yesilika ye-PCB, kunye emva koko uphinde uzisebenzise.
La maxwebhu obuchwephesha kunye namaxwebhu emveliso asetyenziselwa ukuveliswa kwe-PCB, ukuwelda kwecandelo, ukuvavanywa kwephiko lokubhabha, ukulungisa ingxaki kwibhodi yesekethe, kunye nokukopa ngokupheleleyo itemplate yebhodi yesekethe yoqobo.
Ukongeza kwi-cloning ye-PCB, i-PHILIFAST ikwabonelela ngeenkonzo ze-PCB ze-wiring, i-wiring ngokwe-schematics yomthengi kunye neemfuno zoyilo. Ukongeza, inkampani yethu ikwabonelela ngemveliso yoluhlu lwe-BOM, ukumiliselwa kwe-chip kunye nezinye iinkonzo. Iibhodi zethu zokukopa iinjineli kunye noyilo lwe-PCB kunye neenjineli zokulungisa ingxaki zikuqinisekisa ukuba uyikhuphele ngaphandle ibhodi yesekethe efanayo.